मनमोहक मर्दी हिमाल | Jukson
घुस लिएको आरोपमा शाखा अधिकृतसहित…
विप्लव समूहका जाजरकोट इञ्चार्ज पक्राउ
२६ केजी गाँजासहित एक पक्राउ
सवारी नियम मिच्ने चालकलाई खादा…
अतिक्रमित भूमिबाट फिर्ता हुन साहित्यकारको…
लुम्बिनीमा समाचार महोत्सव मङ्सिर १…
मनमोहक मर्दी हिमाल
पोखरा, ०९ असोज
के तपाई दशैँमा आफ्नो परिवार वा सार्थीभाईसँग कतै घुम्न जाने सोच बनाउनुभएको छ । कतै भ्रमणमा गएर अविस्मरणिय क्षणहरु क्यामरामा कैद गर्न चाहानुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईको भ्रमणको महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्छ, मर्दी हिमाल । शान्त शितल मनोरम वातावरणको साथमा सेता हिमालको दृष्यहरु नजिकैबाट अवलोकन गर्न सकिने । प्राकृतिक सुन्दरता । हिमालैहिमालबीच रहदाँ स्वर्गको अनुभूति हुने ठाउँमा जोकोही नगईरहन सायद सम्भव हुदैँन । पहाडी शृंखलाहरुको मनोरम दृष्य, बादल डाँडादेखि हाइ क्याम्पसम्मको रोमाञ्चक बाटो । परिवार र साथीभाईसँग रमाइलो पल विताउने उपयुक्त ठाउँ बन्न सम्छ मर्दी हिमाल ।
मर्दीको मुहान अर्थात मर्दी आधार शिविर घुम्न वर्षेनी लाखौँ पर्यटकहरु त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् । अब घुम्ने ठाउँ विदेश मात्रै होइन भन्ने बुझेर होला, त्यहाँ विदेशी मात्र होइन् स्वदेशी पर्यटकहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा पुग्ने गर्दछन् ।
त्यहाँ जानको लागि पोखराबाट भूपी शेरचन राजमार्ग हुदैँ जानुपर्छ । पोेखरा देखि हेम्जा, धम्पुस, पोथाना हुँदै फरेस्ट क्याम्प, लो क्याम्प, हाइ क्याम्प र बेस क्याम्पमा पुग्न सकिन्छ । घुमाउरो लामो पदयात्राको लागि भने पोखरा नयाँपुल, घान्द्रुक, छोम्रोङ, लान्द्रुक हुदै फरेष्ट क्याम्प, बेस क्याम्प पुग्न सकिन्छ । पोखराबाट सुरु गरेर काँडेको उकालो बाटोसँगै अस्ट्रेलियन क्याम्प पुगिन्छ । अस्टे«लियन क्याम्पबाट हिड्दै पोथाना हुँदै फरेष्ट क्याम्प पुगेपछि पहिलो दिनको यात्रा रोकिन्छ । फरेष्ट क्याम्पमा केही होटलहरु छन् । त्यहि बाँस बस्नु पर्छ तर ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यहाँ कम मात्रामा होटल भएकाले जानु अगाडी त्यहाँ होटलहरुको बारेमा जानकारी लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ । पहिलेको ठूलो खर्क। अष्ट्रेलियन पर्यटक आएर क्याम्प बनाएपछि नाम बन्यो, अष्ट्रेलियन क्याम्प। हाम्रो पहिलो दिनको गन्तव्य फरेष्ट क्याम्प हुन्छ । जगंलको बाटो हुँदै पोथाना र प्रितम देउराली हुदैँ फरेष्ट क्याम्पमा पुग्न सकिन्छ । पोखरा हेम्जाबाट ल्वाङ, सिद्धिङ, हाइ क्याम्प हुदैँ बेस क्याम्प पनि पुग्न सकिन्छ । जंगलको बाटो धेरै हिड्नुपर्ने भएकोले जंगली जनावर भय हुन सक्छ । महत्वपूर्ण अर्को कुरा भनेको केही पर्यटक एक्लै जाँदा वेपत्ता भएको हुनाले एक्लै मर्दी हिमाल जाने सोच नबनाए पनि राम्रो । जानै परे एउटा गाईड लैजादाँ राम्रो हुन्छ । बाटोमा जाँदा रुखमा आकाशे निलो र सेतो रंगको चिह्न रुखमा लगाईएको छ । त्यो चिह्नलाई पछ्याउदैँ जाँदा पनि हराउने सम्भवना कम हुन्छ । केही समय अगाडी एउटा इजरायली नागरिक हराएको खबरले सञ्चालमाध्यममा धुम मच्चयाएको थियो ।
दोस्रो दिनको यात्रा हाई क्याम्पस (३५९० मिटर) । त्यहाँ पुग्न ९ घण्टा हिड्नुपर्छ । जंगलैजंगल ठाडो उकालो हिँडेपछि लो क्याम्प पुगिन्छ । त्यपछिको यात्रा बादल डाँडा हुने छ । बादल डाँडामा एउटा मात्रै होटल रहेछ र केही बन्ने क्रममा छन् ।
बादल डाँडादेखि हाइ क्याम्पसम्मको बाटो भने यात्राकै सबैभन्दा रोमाञ्चक हुने छ । मनै सिरिंग हुने भिरालो बाटोे । त्यो बाटो हिड्न भने ठूलै आँट लिएर जानुपर्छ । हाइ क्याम्प पुगुेपछि भने स्वास्थ्य निकै ख्याल राख्नुपर्छ कारण त्यहाँ नजिकै हिमाल भएकोले चिसो हावा चल्छ जस्ले चिसो ज्यान हुनेलाई समस्यामा पार्न सक्छ । त्यहाँ पनि होटल कमै मात्रामा रहेकाले जानु अघि होटलको विषयमा राम्रो जानकारी लिएर मात्र जान उपयुक्त हुन्छ ।
हाईक्याम्प पुगेर पछि त्यहि बाँस बस्नुपर्छ । भोलिपल्ट बिहानैदेखि आधार शिविर लागि प्रस्थान गर्ने लाईन हुन्छ तर बाटो भने साह्रै अपठ्यारो रहेको छ । किनभने त्यो भिर बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यो बाटो हुदैँ भ्यु प्वाइन्ट पुग्न सकिन्छ । धेरै पदयात्री यही प्वाइन्टमा आएर फर्कँदा रहेछन्। त्यहाँबाट अन्नपूर्ण साउथ, हिमचुली, अन्नपूर्ण प्रथम, माछापुच्छ्रे र मर्दी हिमाल देखिन्छ। अन्नपूर्ण पदमार्गको छोम्रोङ, बेस क्याम्प देखिन्छ । लगभग ५ घण्टा लामो, अक्करिलो भीरको बाटोलाई पार गर्दै मर्दी आधार शिविर (४५०० मिटर) पुगिन्छ । त्यपछि हाई क्याम्पबाट सिद्धिङ हुदैँ पोखरा फकिन्छ ।
१. पोेखरा हेम्जा, धम्पुस, पोथाना हुँदै फरेस्ट क्याम्प, लो क्याम्प, हाइ क्याम्प र बेस क्याम्प
२. पोखरा नयाँपुल, घान्द्रुक, छोम्रोङ, लान्द्रुक हुदै फरेष्ट क्याम्प, बेस क्याम्प (घुमाउरो र लामो पदयात्रा)
३. पोखरा काँडे अस्ट्रेलियन क्याम्प, पोथाना हुँदै फरेष्ट क्याम्प र बेस क्याम्प
४. पोखरा हेम्जा, ल्वाङ, सिद्धिङ, हाइ क्याम्प र बेस क्याम्प
पोखरादेखि मर्दी पुगेर फर्कने समयः औसतमा ३ देखि ४ दिन।
पोखरा मिलनचोकदेखि काँडे (लोकल गाडीमा)
काँडेदेखि पैदल यात्रा सुरु भएर अस्ट्रेलियन क्याम्प(२०६० मिटर)(२ घण्टा)
पोथाना, प्रितम देउराली हुँदै फरेस्ट क्याम्प (२५०० मिटर) पुग्न सकिन्छ। (४ देखि ५ घण्टा)
फरेस्ट क्याम्पदेखि लो क्याम्प(२९९० मिटर)(३ घण्टा), बादलडाँडा हुँदै हाइ क्याम्प (३५९० मिटर)(४ देखि ५ घण्टा)
हाइ क्याम्पदेखि आधार शिविर (४५०० मिटर)(पुगेर फर्कन करिब ९ घण्टा)
हाइ क्याम्प बाट सिद्धिङ (४ घण्टा)
सिद्धिङबाट घलेल हुँदै लुम्रे (५ घण्टा)
लुम्रेबाट पोखरा (जिपमा) (डेढ घण्टा)
मर्दी पदयात्रा सजिलो र सस्तो छ। नेपालीलाई अधिकतम दैनिक १५ सय रुपैयाँले बिहान, दिउँसो र साँझको खाना बस्नलाई पुग्छ। एकदमै न्यूनतम ४ हजारमा खर्च पु¥याउन सकिन्छ ।
न्यानो कपडा (गलबन्दी, पन्जा, मोजा, स्वेटर, मास्क र टोपी)
यात्राका लागि जंक फुड्स (चिप्सहरु, चकलेट्स, दालमोठ, चाउचाउ) र मिनिरल वाटर।
पावर बैंक (क्यामरा र फोनको ब्याट्री बचाउन जरुरी छ, हाइ क्याम्पसम्म बत्ती पुगेतापनि चार्ज गर्नका लागि ठाउँ पाउन गाह्रो हुन सक्छ)
आवश्यक औषधीहरु (निम्स, सिटामोल, ब्यान्डेज), लसुन अदुवालाई प्लास्टिकमा पोको पार्न पनि सकिन्छ।
अनुहारका लागि सन स्क्रिन, हात खुट्टाका लागि लोसन र ओठका लागि चिपिस्टक (हावा र घामले अनुहार बिग्रन सक्छ)
बडा दशैंको आज पाँचौं दिन आज देवी स्कन्दमाताको पूजा गरिदैं
लाजिम्पाटको होटल सांग्रिला अगाडि भेटिएको बम निस्कृय